रंगिन संसार Archives – Drishti Live
अर्गानिक प्रेमकी पर्याय ‘माइली’
२ बैशाख २०७८, 8:42 am
स्याङजा । अर्गानिक प्रेमकी पर्याय ‘माइली’ बजारमा आएकी छन् । दुई प्रेमिल जोडीको प्रेम कथामा आधारित म्युजिक भिडियो ‘माइली’ बुधबार सार्वजनिक भएको छ । वाइड नेपाल युट्युब च्यानलले म्युजिक भिडियोलाई सार्वजनिक गरेको हो । गीत…
‘साइँली रेलैमा’ लाेकदाेहाेरी बजारमा
२३ माघ २०७७, 9:16 pm
काठमाडौ, माघ २३ गते । गायक बेग राना र गायिका मञ्जु लवतीद्वारा स्वरबद्ध लोकदोहोरी गीत ‘साइँली रेलै’मा बजारमा आएको छ । गायक रानाको युट्यूब च्यानल ‘बेग राना अफिसियल’ बाट बजारमा आएको हाे। गीतको लय शब्द…
आजबाट स्वस्थानी व्रत एव‌ं माघ स्नान शुरु
१५ माघ २०७७, 12:23 pm
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान आजदेखि शुरु भएकाे छ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना स्वस्थानी व्रत र माघ…
बेग रानाकाे ‘लाैरी टेकेकाे’ बजारमा … (भिडियाे सहित)
७ मङ्सिर २०७७, 9:48 pm
स्याङ्जा । लाेकदाेहाेरी गायक बेग रानाकाे ‘लाैरी टेकेकाे’ लाेकदाेहाेरीगीत बजारमा आएकाे छ । गीतमा गायक राना र मञ्जु लवतीकाे स्वर रहेकाे छ । गीतकाे लय, शब्द र संगीत गायक रानाकै हुन् । गीतकाे म्यूजिक भिडियाेमा…
गाेधूली साँझमा : आहा ! इन्द्रेणीकाे सातै र‌ंग !
८ भाद्र २०७७, 2:42 pm
गायिका शर्मिला गुरुङले मौलिक तीजगीत ‘जलुका’ ल्याइन् (भिडियो सहित)
९ साउन २०७७, 1:35 pm
स्याङ्जा । गायिका शर्मिला गुरुङको तीजगीत बजारमा आएको छ । सदाबहार गायिका गुरुङले मौलिक तीजगीत ‘जलुका’ बजारमा ल्याएकी हुन् । आफ्नै युट्यूब च्यानल ‘शर्मिला गुरुङ’ मार्फत गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन् । गीतमा लय/…
विक्रम परियार र सुनिता बिसीको ‘आधा माया’ गीतमा नायक दिलीप…
३ साउन २०७७, 7:29 pm
स्याङ्जा । लोकदोहोरी गीत ‘आधा माया’ को म्यूजिक भिडियो बजारमा आएको छ । गायक विक्रम परियार र गायिका सुनिता बिसीले ‘आधा माया’ लोकदोहोरी गीतको म्यूजिक भिडियो ‘स्रोता संगीत’ य्ट्यूब च्यानलबाट बजारमा ल्याएका छन् । सो…
१ साउन २०७७, 1:27 pm
स्याङ्जा । लोकलोहोरी गायक बेग रानाको तीजगीत बजारमा आएको छ । रोजगारीको क्रममा जापानमा बस्दै आएका गायक रानाले तीजगीत ‘बरिलै’ आफ्नै युट्यूब च्यानलबाट बजारमा ल्याएका हुन् । उनी विगत तीन वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका छन्…
बालगायिका कमला घिमिरेको तीजगीत ‘लरिलरि लै रुन्छु बरिलै …’ (भिडियो…
१२ असार २०७७, 12:51 pm
स्याङ्जा । बालगयिका कमला घिमिरेको तीजगीत बजारमा आएको छ । गायिका घिमिरेले ‘लरिलरि लै रुन्छु बरिलै …’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो शुभारम्भ डिजिटल म्यूजिकको युट्यूब च्यानल मार्फत बजारमा ल्याएकी हुन् । बजारमा ल्याएको छोटो समयमै…
प्रगतिशील गीत ‘कामी दाईको छोरो’ ए…साइली !
२२ जेठ २०७७, 9:57 pm
स्याङ्जा । प्रगतिशील गायक खेम सेञ्चुरीको ‘कामी दाईको छोरो’ गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार साँझ गायक सेञ्चुरीले आफ्नै युट्यूब च्यानल ‘खेम सेञ्चुरी’ मार्फत उक्त गीतको भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘कामी दाईको…